Azonao atoro ahy ve ny fifandraisana amin'ny Google backing daty?
Nandritra ny folo taona lasa izay, ny anjaran'ny tompon-tranon'ny tompon'ny tranonkala sy ny webmasters dia nahitana vondron'olona goavam-be sy adin-tserasera goavam-be - rehetra noho ny toerana ambony ao amin'ny SERPs. Vokatr'izany, dimy taona lasa izay dia namoaka ny algorithm voalohany amin'ny alàlan'ny Penguin ny milina fikarohana lehibe - hanombohana ny famaizana sy fametrahana ny PBNs (tambajotra tsy miankina), famolavolana toeram-pambolena, rohy (fifanakalozana), ary fampiakarana sainam-panitsiana mena miaraka amin'ny blaogin'ny gaza amin'ny tanjona fananganana rohy. Izany no antony na dia ny fialana vitsy amin'ny toro-hevitra fototra ao amin'ny Google momba ny tsindry tsy misy dikany, na spammy na manipulative manipulative dia afaka mametraka ny tranokalanao na blôgy amin'ny sazy am-ponja.
Google dia manambara ny fifandraisana tsara amin'ny ratsy
Ny zavatra voalohany mampiseho fifamatorana mafy eo amin'ny tahiry backlinks sy ny toerana misy ny laharana eo amin'ny Google dia ny Ny tontolo maoderina amin'ny tranonkala dia feno rohy ara-bakiteny. Olona marobe amin'izy ireo dia avy amin'ny robots amin'ny aterineto. Ny sasany dia natsangana ho an'ny fivarotana lehibe na natao ho an'ny fifanarahana fifanakalozana manokana. Amin'izany fotoana izany, ny rohy sasantsasany dia mety hifanaraka tanteraka amin'ny fomba fijery araka izay azo atao, ny sisa amin'izy ireo dia ireo rohy an-tserasera. Noho izany, ny fanamby lehibe amin'ny Google dia ny mandinika ny antontan-kevitra momba ny backlinks amin'ny tranonkala na bilaogy rehetra - mba hahafantarana hoe iza no milalao lalao tsara ary mendrika tokoa ny hametrahana izany toerana avo izany.
Daty Backlinks sy Akany Marina
Raha ny marina, rehefa mahita rohy mampiseho ny làlana mankany amin'ny tranokalanao na ny blôginao ny motera lehibe tahaka an'i Google dia misy ihany ireo safidy telo isaky ny backlink manana. Midika izany fa azo ekena ho marim-pototra sy mendrika hodinihina amin'ny algorithm ofisialin'ny Google. Amin'izany fotoana izany, ny zavatra rehetra dia afaka mitoetra ho iray ihany - ary ny rohy sasantsasany dia azo raisina ho tsy misy dikany sy tsy misy - tsy misy fiantraikany amin'ny fomba fijerin'ny SEO. Raha ny marina, mety ho voasazy ny tranonkalanao na ny blôgy, raha ampahafantarina fa ny ampahany amin'ny rohy ao amin'ny rakitra backlinks (na rohy tokana iray ihany) dia ahiahiana ho toy ny manipulative na artificial nature.
Cold Facts About Rankings sy Backlinks Database
Noho izany, misy fifandraisana sasantsasany eo amin'ny tena toerana ao amin'ny SERPs sy ny rindran-kirakira ao amin'ny tranokala tsirairay. Fa ahoana ny endriny? Ity ny lisitry ny teboka bullet mba hampisehoana ny rohy ekena afaka ataonao amin'ny isa misy anao.
Ny toerana ambony ao amin'ny SERP dia mifandraika amin'ny isan'ny loharanon'ny rohy amin'ny 30 eo ho eo;
io tarehimarika io dia toa mahatalanjona kokoa, raha toa ka tsy mahagaga ihany koa ny fifandraisana kely kokoa - amin'ny filazana fa afaka miantehitra amin'ireo famantarana 200 eo amin'ny sokajy i Google;
mihoatra ny 99% n'ny tranonkala rehetra sy ny bilaogy nodinihina tamin'ny tranga vao haingana dia nahitana farafaharatsiny rohy ekena ivelany;
eo ho eo ny 22% amin'ny pejy tsirairay dia hita fa tsara tsara tsy misy backlinks ivelany;
manana rohy bebe kokoa dia afaka mifandray amin'ny toerana ambony kokoa, fa ny fialana amin'ny isa fa tsy ny kalitao dia tsy voatery midika fa ny tranokalanao dia haseho ao an-tampon'ilay fikarohana Source .